Mashiripiti makadhi akarova iyo App Store nemutambo 'Iyo Kuunganidza Arena' | IPhone nhau
Mashiripiti makadhi akarova App Store nemutambo 'Iyo Kuunganidza Arena'
Ngirozi Gonzalez | 29/03/2021 22:00 | IPhone mitambo, Noticias
Kadhi nemitambo yebhodhi ndeimwe yeakanakisa zvikuru mumhuri dzese. Nekudaro, nekufamba kwenguva uye kusvika kwe itsva technologies, makambani anonzwa kudiwa kwekukwakuka kuenda kumapuratifomu edhijitari kuti vararame. Iyi ndiyo mamiriro emitambo mikuru yakadai se'Monopoly 'kana' Catan 'iyo yakatanga mitambo yavo kuyedza kutora pfungwa dzevatambi muzvitoro zvekushandisa. Mashiripiti: Kuunganidza ndeimwe yemitambo yemakadhi yakanyanya kutambwa mupasi uye mazuva mashoma apfuura vakaparura zviri pamutemo 'Iyo Inounganidza Arena', Chizere chizere chine michina imwechete muApp Store ne Play Store.
Dzoreredza iwo Makadhi eMagetsi mumutambo mutsva wepamutemo unowanikwa paApp Store
Unotozviziva. Iye zvino tora uye unakirwe neyekutanga nzira yemakadhi kadhi pafoni yako. Nyore svinura madheki ane simba, uwane mibairo nekuda kwekutamba, uye svetukira mukuita nemhando dzakasiyana dzemafomati evatambi veese matanho ehunyanzvi. Iko hakuna kumbove nenguva iri nani yekutanga kutamba Mashiripiti.
Kunyangwe iwe wakambotamba maMicrosoft makadhi kana kwete, 'Iyo Gathering Arena' inotanga mutambo kutidzidzisa kutamba kubva pakutanga. Chinangwa chiri nyore: edza kurova vadzivisi. Kune izvi isu tichafanirwa kushandisa edu makadhi. Makadhi anodya mana ekumisikidza zvisikwa, zvitsinga uye kukudziridza hunyanzvi kugona kune vavengi.
Mutambo une yekuwedzera yekuwedzera: mibayiro yezuva nezuva. Izvi zvinobvumira mutambi kuti awane makadhi ari nani anovabvumira kurova vanopikisa zviri nyore. Vanogonawo kuva tenga madheki kuburikidza ne-mukati kutenga. Iwo mamwe madheki aunayo muaccount yako inogona kushandiswa muakaundi yako imwe pane mamwe mapuratifomu sekuMacOS, Windows kana Android. Nenzira iyi, Mashiripiti akwanisa kugadzira mutambo weplatform kuti ubate huwandu hwevatambi.
Kana iwe uchida kupinda munyika yeMagic makadhi pane iDevice yako, unofanirwa kunge uine iPhone 8, X, XR, XS, XS Max, 11 uye 11 Pro kana 12 (ese mamodheru). Nezve kuenderana kwePadad, mutambo unoenderana neyechishanu chizvarwa iPad mini, iyo 5 iPad, yechina uye yechina chizvarwa iPad Mhepo, 2020-inch iPad Pro uye 3-inch iPad Pro pane yayo yechitatu neyechina chizvarwa.
Mashiripiti: Iyo Nzvimbo Inounganidzavakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Mashiripiti makadhi akarova App Store nemutambo 'Iyo Kuunganidza Arena'
Kukurudzira uye zvivakwa zvevashandi veApple kuti vabaiwe jekiseni re COVID-19
Mifananidzo yeprototype iPad inoratidza kuti yaive nemaviri ekubatanidza